"Karnitsetin": yokusetshenziswa, incazelo izidakamizwa, analogue, ukubuyekezwa
Inani izifo zezinzwa elinesimo ukulahlekelwa okuqhubekayo izinzwa. Le nqubo kusiza ekulinganiseni yokwelapha eziyinkimbinkimbi, zazo zihlanganisa "Karnitsetin" - a okufakiwe yemvelo evikela amaseli bese ulawula ukudluliselwa umfutho.
"Karnitsetin" - kulokho kusetshenziswa?
I izinkomba esiyinhloko ukusetshenziswa kwezidakamizwa ungaphakathi esigabeni sokuqala komqondo (uhlobo Alzheimer futhi cerebrovascular). Futhi, lokhu ibhekwa Kunconywa syndromes involutional ukuthi ukuthuthukisa ku isizinda semithambo encephalopathy, peripheral kanye nohlobo neuropathy. Phakathi izimpawu - kwehle engqondweni, libhekene Ukuwohloka zokukhumbula noma ukugxilisa ingqondo.
Isenzo Izithako okuhloswe ngazo okwandisa izinga acetylcholine, kanjalo ekuthuthukiseni conduction Izinzwa amaza, ukuthi kuyasiza ukwenza ukuphila kube lula ukuze iziguli isifo i-Alzheimer. Futhi eqinisa ukundlulisa umfutho phakathi izinzwa ukunikeza ekuphuculeni zokukhumbula noma ukugxilisa ingqondo. Umuthi ngempumelelo izikhathi ukucindezeleka nokukhathala kuzipha amandla, njengoba ikuvumela ukuba ngokushesha buyisela futhi ukusebenza evamile umzimba. "Karnitsetin" (yokusetshenziswa eziqukethwe iphasela ngalinye) ngempumelelo lishintsha umzimba amandla. ukusetshenziswa kakhulu kwezimoto fatty acid njengoba main mthombo wamandla.
"Karnitsetin" (intengo -. 550-580 RUB) itholakala ifomu capsule, njengoba isithako main kuyinto acetyl-L-carnitine.
Dementia: kungani kukhona ngayo futhi sibaphathe ngayo?
Ngaphansi komqondo Alzheimer ukuqonda komqondo senile, yisimo ezimweni eziningi lihlotshaniswa Alzheimer. I zokugula libhekene zinguquko zokuthuthukisa esiwohlozayo ku izinzwa ingqondo. Phakathi kwezici kubenza bavame ukuba komqondo, sikude (ngaphezu Alzheimer), ubudala engaphezu kuka-80, kanye ufuzo. Eminye imigomo nemibandela ukuthi kwandisa ingozi kanye nobungako ukuqhubeka kwesifo, ngokuvumelana ukukhuluphala, ukungawuvivinyi umzimba, kuhlasimulise okulimala ebuchosheni, kanye nesifo sikashukela.
Morphologically Dementia elihlobene ne kokulimala kanzima futhi CNS amaseli. Kungase umphumela endocrine kanye ukwehluleka sokuhlasela kwamasosha omzimba, omzimba izicubu erythematosus, kanye zenzeka njengoba izinkinga zokwenza hemodialysis. Njengomthetho, ekuthuthukiseni zokugula icala sezici ezimbalwa.
Ukulungiselela "Karnitsetin" (yokusetshenziswa ke yazisa) siyasebenza kuphela esigabeni sokuqala lesi sifo. Izimpawu eyinhloko lesi sikhathi kukhona inkumbulo ukungakhuli okuhlushwa kahle. Isiguli ngokuvamile awukhumbuli izinto ezijwayelekile, okumenza igxile sezwe ajwayelekile. Iziguli unobunzima izibalo kanye nokuhlaziywa i- nokuhlola imihlola ehlukahlukene. Ngokuvamile, lezi zimpawu kuyagcinwa e kweminyaka eyi-60.
Ukwelashwa lesi sifo kusiza kuphela yokuvimbela izimpawu, futhi akusho neqhaza ikhambi eliphelele. "Karnitsetin" (intengo lincike inethiwekhi ekhemisi lapho wena uthenge ke) lihambisana namanye izidakamizwa kusiza ekulinganiseni isifo - ukubambezela inchubekelembili yayo.
"Karnitsetin" nokungawuvivinyi ngokwanele ukusebenza kwengqondo
Ukukhathala kuyimbangela eyinhloko ezinjengokungcoliswa operability encishisiwe. It uvame ukuhambisana ukucindezeleka futhi ukwephulwa umbuso kosuku, okuholela okwengeziwe Ukuwohloka emzimbeni. Isimiso sezinzwa ngenxa sindisa kuthinta imisebenzi ngokomzimba zomzimba. Isikhalazo ezivamile - ubuhlungu bemisipha, kodwa ngokuvamile liwohloka umsebenzi yokuphefumula nowokugaywa zenhliziyo.
Encishisiwe engqondweni iqala ukubonisa ukwehla emakamu. Iziguli nobunzima ekwenzeni umsebenzi ojwayelekile, awakwazi ukugxila into oyifunayo. Ngaphezu kwalokho qondanisa izinkinga inkumbulo, kanye kwezimpawu zomzimba sindisa. Umzimba abakwazi njalo usizo lokubhekana nenkinga enkulu enjalo. Umuthi 'Karnitsetin "(kobufakazi nesineke iwubufakazi) kusiza ukulwa hhayi kuphela ukuchaza izimpawu, futhi kwandisa ukucindezeleka futhi, kuphakamisa kwemizwelo.
"Karnitsetin" ayisiwo umuthi, kuba okufakiwe begazi, ngakho uhlu kukhawulwe kuphela hypersensitivity contra. ,, Naka kodvwa kutsi ebekiwe sakhe ngokuqapha in iziguli isithuthwane. Ezimweni ezinjalo, udokotela kudinga ukuzithiba ngokucophelela, njengoba ukwanda ukudluliswa umfutho kungaholela ukushukuma ngokweqile nezinezimo epileptogenic consequently ukuhlaselwa njalo. It Kunconywa nokuqapha njalo iziguli anjalo.
Nezithasiselo kufanele zithathwe nge ukudla. Njengomthetho, iqondiswa 1 noma 2 Amaphilisi / ngosuku, kodwa ngaphambi isicelo zomuthi kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso, ikakhulukazi uma okufakiwe isetshenziselwa abacindezela izimpawu Alzheimer. ethola inkambo 1 inyanga.
Ngokuvamile, izidakamizwa babekezelelwa kahle. Phakathi side effects kungenzeka isicanucanu nokuhlanza, isifo sohudo kanye ukulunywa futhi ukuqubuka uma hypersensitivity kuya "Karnitsetinu".
I okufakiwe akuphazamisi ikhono ukushayela izimoto futhi enze umsebenzi okudinga ukuba agxilise ingqondo eliphezulu ukunakwa.
I okufakiwe siyasebenza esikhathini kwempilo ewohlokayo. Iziguli babika ukuthi bazizwa kangcono ngemva inkambo. Ikakhulukazi batusa lokhu izidakamizwa ngesikhathi ukucindezeleka kweseshini, nobunzima emsebenzini. Iphinde kusiza ekudambiseni izimpawu in iziguli isifo i-Alzheimer noma umsangano obangwa yi yezinye etiologies, kodwa kulokhu umphumela siyenzeka kuphela ekwelapheni, njengoba kwaphawula u-Izibuyekezo.
Ngempumelelo ukulondoloza isimiso sezinzwa isebenzisa "Karnitsetin". Analogue of eminingi yayo, ethandwa kakhulu phakathi kwabo "Karniteks". Izinkomba efana (uhlu letinikwe lapha ngenhla). isilinganiso umthamo nsuku zonke 6-12 amaphilisi, futhi umthamo owodwa nesikhathi yokwemukela kunqunywa udokotela. esiphezulu Dementia umthamo - 4000 mg / ngosuku, kunconywa ihlukaniswe 2-3 Ukweqiwa. Lapho neuropathies of etiologies ehlukahlukene iqondiswa 1500-3000 mg / usuku. Umthamo ngqo is kushintshwe ngamunye isiguli ngasinye.
Of imiphumela emibi kungenzeka komzimba, isicanucanu futhi isilungulela. Ezinye iziguli ukubika umuzwa nokungakhululeki okuthile. Ngaphezu kwalokho, umchamo kanye umjuluko ngokuvamile kubonakala iphunga eyinqaba.
"Karniteks" akufanele athathwe ngaphambi kweminyaka engu-18, futhi phakathi nenkathi yokukhulelwa iqondiswa kuphela ngaphansi izinkomba esiqinile udokotela. Umuthi kungenziwa ngokuthi ephephile uma ulandela imiyalelo kanye nemiyalelo ye udokotela, kodwa akukho Kunconywa engayitholi kuhlangene kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo. Akumele kuhlanganiswe "Karniteks" nge "acenocoumarol." Uma udinga reception kanyekanye "warfarin", idinga ukuqapha ngokucophelela yezokwelapha kwesimiso lesiguli.
Nezithasiselo "Karnitsetin" (yokusetshenziswa enikeziwe esihlokweni) kuyindlela enhle zokuthuthukisa umsebenzi engqondo futhi bavikele isimiso sezinzwa. Umthelela siyenzeka emva Yiqiniso Izithako. In the ukungabikho elamukelekile kungenzeka ukuba esikhundleni izidakamizwa noma umthamo ukulungiswa. Medicine "Karnitsetin 'ebekezelele ngokubhekakade kahle futhi has cishe akukho Izimo, kodwa ngaphambi kokuthola engcono uthintane owelapha.
Ukulungiselela "Alfadol-Ca": yokusetshenziswa, isichasiso, analogs kwakwakhe. "Alfadol-Calcium": kuzibuyekezo, izintengo
"Dobutamine": yokusetshenziswa, ifomu ukukhululwa, umthamo, ukubuyekezwa, analogue
Taurine - kuyini? "Taurine" (amathonsi): yokusetshenziswa. "Taurine" amaphilisi
Okushiwo ulwe induna "Skinoren" (gel). Izibuyekezo umthengi
Umuthi 'Ismizhen ": yokusetshenziswa, incazelo, ukubuyekezwa
Umuthi 'Divigel ": ukubuyekezwa, izincazelo, isicelo
Kanjani ukulawula plastic emphemeni iminyango bebodwa?
Umabhalane wenkantolo. Izidingo Nemithwalo Yemfanelo
Izinso hydronephrosis: ukwelashwa kufanele kube ngesikhathi esifanele
Uhlelo intela US
Incwadi yophenyo kanye imithetho ukuloba kwakhe
Ukukhululwa Budapest amasosha aseSoviet
Amaqiniso ethakazelisayo rose, ngemva kwalokho uzongithanda le mbali